दाङमा वैकल्पिक विमानस्थल बनाउने सरकारी योजना–२ | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / दाङमा वैकल्पिक विमानस्थल बनाउने सरकारी योजना–२
दाङमा वैकल्पिक विमानस्थल बनाउने सरकारी योजना–२
Posted by: युगबोध in विचार July 10, 2018	0 524 Views
दाङमा वै कल्पिक विमानस्थल बनाउने सरकारी यो जना शीर्षकको ले ख अघिल्लो साता नया युगबो धमा प्रकाशित भएपछि सामाजिक सञ्जाल फे सबुकमा समे त उक्त ले ख प्रचारित हुन पुग्यो  । छापामा ले ख पढे र पाठकहरुको प्रतिक्रिया कस्तो रह्यो त्यो त प्रत्यक्ष जान्न पाइएन । तर फे सबुकमा जनाइएका प्रतिक्रियाले भने मलाई उक्त शीर्षकमा थप कुरा ले ख्न पे ्ररित ग¥यो र यो ले ख तयार भएको छ । अब शीर्षकको सन्दर्भतर्फ लागौ ं । दाङको नारायणपुर क्षे त्रमा वै कल्पिक विमानस्थल बनाउने कुराले दङालीको दिमाग तताएको छ । टरिगाउ विमानस्थलको पक्ष लिदै कतिले नया विमानस्थलको आवश्यकता नभएको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभएको छ । सायद उहाहरुलाई नारायणपुर क्षे त्रमा बन्ने विमानस् थल टरिगाउ जत्रै आकारको बन्ने त हो ला भन्ने लागे को छ हो ला । कतिले टरिगाउ विमानस्थललाई विस्तार गरे र सुचारु गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिनु भएको छ । सायद उहाहरुलाई टरिगाउको तन्किन सक्ने क्षमता जति पनि छ भन्ने लागे को हो ला । खुद नारायणपुरवासी, जो प्रत्यक्ष विस्थापितको जो खिममा हुनुहुन्छ, ले त आफू विस्थापित हुने कुराले पिरो ले र हो ला, विमानस्थल बन्नै नदिने सम्मको खरो प्रतिक्रिया प्रकट गर्नुभएको छ । ‘जहा भिजन त्यहा व्यारियर’ भन्ने मार्मिक भनाई चलनचल्तीमा छ । त्यसै ले यसरी प्रतिक्रिया प्रकट हुनुलाई स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्दछ । यद्यपि विमानस्थलको पक्षमा पनि प्रशस्त राय प्रकट भएका छन् ।
विचारणीय कुरा के हो भने विकासका विषयमा आम सहमति वन्न सक्नुपर्दछ । वडो सो च विचार गरे र भविष्यसम्मलाई सुविधा पु¥याउने कुरा ख्याल गरे र निर्णय गर्नुपर्दछ । यस निमित्त सरकार, समुदायलगायत सरो कारवालाबीच सम्वाद हुनुपर्दछ । विमानस् थल निर्माण गनेर् विषय वृहत लगानीको विषय हो  । जमिन पनि प्रशस् त चाहिन्छ । प्राविधिकरुपमा जमिन समथर र विमान उडान तथा अवतरणका लागि सजिलो हुनुपर्दछ । आयो जनासग सम्बन्धित तथ्य, सूचना र जानकारीमा आधारित भएर सम्वाद वा बहस गर्नुपर्दछ । यही मर्मलाई आत्मसात गरे र विषयलाई अझ सूक्ष्मरुपमा के लाउ“दै आफ्नो बुझाइलाई सरो कारवालासमक्ष राख्नु सान्दर्भिक हुने ठाने र यो ले ख तयार पारे को छु ।
बाके जिल्लाको खजुरामा विमानस्थल थियो  । त्यो सञ्चालनमा थियो  । त्यसलाई विस् तार गरे र ठूलो बनाउन पनि सकिन्थ्यो हो ला । तर विमानका लागि उडान र अवतरण गर्न प्राविधिकरुपमा कठिन हुने निष्कर्षका साथ सरकारले विकल्प पहिल्यायो र राझामा नया विमानस्थल बन्यो  । दाङको अवस्था पनि त्यस्तै छ । टरिगाउ विमानस्थललाई तन्काउदा बढीमा एक हजार मिटरसम्म लम्बिन सक्छ । एक हजार मिटरसम्मको लम्बाइले मझौ ला र ठूला विमान थे ग्न सक्दै न । यो विमानस्थल उत्तर दक्षिण फै लिएको छ । तराईमा पूर्व पश्चिम फै लिएको विमानस्थललाई प्राविधिकरुपले सहज मानिन्छ । यस्तो मा विण्डक्रसको समस्या हुदैन। त्यसै ले दाङमा बे लै मा विकल्प पहिल्याउन आवश्यक छ । तथापि तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले टरिगाउ विमानस्थललाई विस्तार गनेर् सो चबाटै आफ्नो ने तृत्वमा ने पाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महा निदेर् शकलगायतका प्राविधिक विज्ञहरु, मन्त्रालयका सहसचिव, तत्समयमा दाङबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गनेर् सांसदहरु राजु खनाल र अनिता दे वको टा एवं तत्कालीन सिंचाईमन्त्री दीपक गिरीसमे तले स् थलगत निरीक्षण गर्नुभएको थियो  ।
प्राविधिक टो ली करिव एक महिना दाङमा रहे र विस् तृत अध्ययन तथा लागत लाभ विश्ले षण गरे को थियो  । तर टरिगाउ“ विमानस् थललाई विस् तार गर्न लाग्ने खर्चको अनुमान र त्यसले दिने प्रतिफल एवं प्राविधिक पक्षको विश्ले षणबाट उक्त विमानस्थल दीर्घकालसम्मका लागि उद्दे श्य पूरा गर्न सक्ने नदे खे र सो ही समयमा उक्त प्राविधिक टो लीले नारायणपुर क्षे त्रको समे त संक्षिप्त अवलो कन गरे को थियो  । उक्त अवलो कनबाट सो क्षे त्र विमानस्थलका लागि उपयुक्त हुने प्रारम्भिक निष्कर्षमा उक्त टो ली पुगे को थियो  । उक्त कुरा तत्समय भ्रमणमा संलग्न प्राधिकरणका अधिकारीबाट जानकारी भएको छ । साथै नारायणपुरक्षे त्रमा त करिव साढे पाच किलो मिटर धावनमार्गको ने पालमा सबै भन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रियस् तरको विमानस्थल बनाउन सकिने सम्भावना रहे को समे त ने पाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्राविधिक अधिकारीहरु बताउछन् । तराईमा पूर्व–पश्चिम फै लिएको विमानस्थलमा प्राविधिकरुपमा विमानलाई उडान र अवतरण गर्न सहज हुने भएकाले नारायणपुरक्षे त्र विमानस् थल बनाउनका लागि उत्तम रहे को भनाइ समे त उनीहरुको े छ । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने टरिगाउ विमानस्थललाई विस्तार गर्न हदै सम्मको को सिस भएको हो  । तर त्यसले दीर्घकालसम्मका लागि से वा पु¥याउन सक्ने छाट दे खिएन । फलस् वरुप दीर्घकालीन सो चका साथ वै कल्पिक विमानस्थल बनाउने स्थानको खो जी गनैर् पनेर् परिस् िथति बने काले नया ठाउ खो जी गर्दा घो राही–तुलसीपुरको बीचमा पनेर् नारायणपुर क्षे त्र प्राविधिकरुपले संभाव्य स्थानको रुपमा दे खापरे को हो  ।
बाके का जनताले बे लै मा बुद्धि पु¥याएर रॉझामा विमानस् थल बनाउन सघाए । विमानस् थल बन्यो  । अहिले ने पालगञ्ज–को हलपुरको बीचमा पायकस् थानमा विमानस् थलको सुविधा उपलव्ध छ । पहुचका दृष्टिले सहज छ र शहरीकरणका लागि पनि को शे ढुंगा सावित भएको छ । यस्तै दूरगामी सो च वा चे तना दङालीमा मुखरित हुन आवश्यक भएको छ । यतिखे र हाम्रा बीचमा समझदारी हुनै पर्दछ । घो राही–तुलसीपुरको बीचमा रहे को नारायणपुर क्षे त्रमा ठूलो आकारको विमानस्थल बन्दा त्यसले एउटै महानगर बनाउने सो चलाई पनि सिंचन गनेर् छ । आफूलाई मात्र मनपनेर् कुरा गनेर् बानी परे र हाम्रा प्रतिक्रिया बाहिर आउछन् । सबै लाई मनपनेर् कुरा पहिल्याएर छलफलमा जाने हो भने सहमतिमा नपुग्ने कुरै आउदै न । टो लवस्ती वा शहरमा वर–पिपल लगाउने वा धर्मशाला बनाउने को ही–को ही मात्र हुन्छन् । तिनको लाभ लिने धे रै वा सबै हुन्छन् । भविष्यलाई सो च विचार गरे र वर–पिपल लगाए जस्तै वा धर्मशाला बनाए जस्तै विमानस्थल बनाउने कार्यमा पनि पुस्ता दरपुस्ताको भविस् य सो चे र निर्णय गर्नुपर्दछ । दङाली ने ताहरुको प्रयत्नले , दाङ उपत्यकाको समथर सुन्दरताले र जनताको सौ भाग्यले नया विमानस्थल बनाउने साइत जुरे को छ । सरकारले दूरदर्शी भएर आफ्नो यो जना सार्वजनिक गरे को छ । अब दङाली दूरदर्शी हुने कि नहुने ? सहयो ग गनेर् कि नगनेर् ? यतिखे रका टड्कारा प्रश्न यिनै हुन् । टरिगाउ विमानस्थलको अहिले को क्षमता उन्नाइस सिटको ट्वीईनअटर विमान उडान अवतरण गर्नका लागि मात्र यो ग्य छ । त्यसलाई हदै सम्म विस् तार गर्दा पनि साना मझौ ला आकारका विमानहरु मात्र उडान अवतरण गर्न सक्लान् । के दाङको भविष्यलाई साना मझौ ला विमानहरुको से वामा मात्र सीमित गनेर् ? ठूला आकारका विमानको सपना नदे ख्ने ? दाङबाट विमान चढे र विदे श जाने दिनको परिकल्पना नै नगनेर् ? अलि गहन र फराकिलो भएर सो च्ने बे ला यही हो  ।
दाङ उपत्यकामा वृहत् सिंचाई आयो जना प्रारम्भ भएको छ । यो आयो जना ल्याउन अपे क्षा, शुभे क्षा, सहयो ग र सद्भाव धे रै को भए पनि निर्णय र कार्यान्वयनमा प्रत्यक्षरुपले तत्कालीन सिंचाईमन्त्री दीपक गिरीको यो गदान रहे को छ । यस आयो जनाले दाङमा आशा जगाएको छ, उत्साह बढाएको छ र उर्वरभूमि दाङमा कृषि क्रान्तिको संभावनालाई विश्वसनीय बनाएको छ । आधारभूतरुपमा कृषिमा निर्भर जीवनयापन गर्न सिंचाई आयो जनाले यो गदान पु¥याउने छ र कृषकलाई धनी बनाउने छ । हाम्रो भविष्यलाई अझ सुन्दर र समृद्ध बनाउन को शे ढुंगाको रुपमा नया“ विमानस् थल आयो जना हामीले पाएका छांै  । दङालीको भाग्य बदल्ने यी दुबै आयो जनालाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्न प्रदे श नं. ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पो ख्रे ल उच्च प्राथमिकताका साथ लागिरहनुु भएको छ । यो अवस् थामा हामी सबै भे ग वा भूगो ल अथवा विचार वा पार्टीको े घे राभन्दा माथि उठे र वृहत् सो चका साथ अघि बढ्नुपर्दछ । एकातर्फ वृहत् सिंचाई आयो जनाले ल्याउने हरितक्रान्ति र अकोर् तर्फ विमानस् थलको निर्माण र सञ्चालनले सिर्जना गनेर् अवसरका बीच दाङमा भौ तिक पूर्वाधार विकास र स्वास्थ्य, शिक्षालगायत सामाजिक क्षे त्रका धे रै संरचनाहरु पनि सगसगै तयार हुने छन् । यसबाट आर्थिक विकासका अने कांै ढो का खुल्ने छन् । मानवीय रहर र प्रयत्नले ती सबै को लाभ लिदै दङालीहरु समृद्ध दाङको अनुभूति गनेर् अवस्थामा उक्लन सम्भव हुने छ । तर अहिले झिना मसिना कुरामा अल्झिएर आएको अवसर गुमायांै भने हामी सधै पछि पनेर् छौ ं । त्यसै ले वै कल्पिक विमानस्थलका विषयमा प्रतिक्रियाका लागि प्रतिक्रिया दिने काम नगरांै  । यो पुस्ताको जिम्मे वारी अकोर् पुस् तालाई अझ राम्रो दाङ हस् तान्तरण गर्नु हो भन्ने कर्तव्यबो ध गरे र सामुन्ने मा आएको आयो जनालाई कार्यान्वयन गर्न हामी सबै जुटांै  । समयले हामीलाई दिएको जिम्मे वारी यही हो  ।
यसरी आयो जना कार्यान्वयनको पक्षमा कुरा गरिरह“दा अत्यन्त संवे दनशील भएर हे क्का राख्नुपनेर् र सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपनेर् विषय हाम्रो जिम्मे वारीमा छ । त्यो भने को आयो जनाले विस् थापित गनेर् घरपरिवारलाई सम्मानपूर्वक व्यवस् थापन । यसका विधि र प्रक्रिया शुरुमै स् पष्ट, पारदर्शी र जनतामै त्री हुुनुपर्दछ । विमानस्थल बन्ने स् थानबाट उत्तर र दक्षिणतर्फ प्रशस्त जमिन छ । त्यहा आधुनिक शहर बसाउन सकिन्छ । विस् थापित हुने परिवारको संख्या र अचल सम्पत्तिको मूल्यांकन गरे र त्यही प्रस्तावित शहरमा व्यवस् थापन गर्ने विकल्प अघि सार्न सकिन्छ । अरु अझ राम्रा विकल्प पनि पहिल्याउन सकिन्छ । विकल्प पहिल्याउनमा सरकार र समदुायबीच चरणबद्ध सम्वाद हुनुपर्दछ । समुदायले सरकारलाई नसघाउने र सरकारले समुदायको मर्का नवुझ्ने हो भने राज्य कसरी चल्छ ? त्यसै ले समुदाय विकल्पका साथ प्रस्तुत हुनै पर्दछ । सरकार पनि विस्थापित हुने घरपरिवारप्रति संवे दनशील भएर समुदायको चित्त बुझाएर अघि बढ्नुपर्दछ । नकारात्मक कुराले भलो पनि गदैर् न र निकास पनि दिदै न ।
निष्कर्षमा समुदायले प्रकट गरे को खरो प्रतिक्रियाले संवाद खो जे को दे खिन्छ । सरकार खुला रुपमा बहस गरे र सम्मानपूर्वक व्यवस् थापन गर्न तयार हुनुपर्दछ । आफू त्यसै भे गको भएकाले नारायणपुर क्षे त्रका वासिन्दा दाङको श्रीबृद्धिमा छे के वार बन्नुहो ला भन्ने म कल्पना गर्न सक्दै न । सरकारलाई पनि विस्थापित हुने घरपरिवारको सम्मानजनक व्यवस्थापनमा अन्यथा बन्न संविधान र कानूनले दिदै न । यसका लागि संवाद पहिलो शर्त हो  । विधि र प्रक्रियामा सहमति हुन सके मा बा“की कुरा त्यसै ले मार्गप्रशस्त गर्नेछ  । दया, माया, इमान र विवे क सबै मा हुनुपर्दछ । ‘सर्टर गे न, लङ्गर पे न’ को बाटो कसै का लागि पनि सही समाधान बन्न सक्दै न ।
Previous: आय–आर्जनको राम्रो स्रोत केरा खेती
Next: बढ्दो बलात्कार रोक्ने दायित्व